မေမေ ချစ်သုဝေ နဲ့ အတူတူ ဝိုင်းကူရင်း အပင်လေးတွေ စိုက်နေတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ် – Shwe Likes
မေမေ ချစ်သုဝေ နဲ့ အတူတူ ဝိုင်းကူရင်း အပင်လေးတွေ စိုက်နေတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်
ချစ်သုဝေဆို တဲ့ပြည် သူချစ်အဆိုတော် မင်းသမီးလေးကို အားလုံးပဲ သတိရနေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မေမြန်မာခေတ်နဲ့ မေမြန်မာသစ်ဆိုတဲ့ အမြွှာသမီးလေးနှစ် ယောက်ရဲ့ အမေဖြစ်သလို အဆိုတော်ကြီး ကိုလင်းလင်းရဲ့ ချစ်စရာအိ မ်သူဇနီးလေးဆိုရင် လည်းမမှားပါဘူးနော်။
ပြည်သူနဲ့ တစ်သားတ ည်းအမြဲရှိနေတဲ့ သူမတို့မိသားစုကို ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း လွမ်းနေမှာပါနော်… သူမရဲ့ သွန်သင်မှုအောက်မှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ခေတ်လေးနဲ့သစ် လေးတို့ကို ပရိတ်သတ်တွေက မွေးစကတည်းကနေ အခုချိန်ထိ အရမ်းကိုချစ်ခင် နေကြတုန်းပါ…
သမီးလေးတွေက အဖေရော အမေရော နဲ့တူပြီး သိပ်ကို သွက်သွက်လက်လ က်နဲ့ ချစ်မွှေးပါကြပါတယ်။ ဉာဏ်လည်းအရမ်းကောင်းပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ လူလည်အမြွှာလေးခေတ်နဲ့သစ်က ပရိတ်တွေရင်ထဲ အမြဲရှိနေမှာပါ။
သူတို့လေး တွေရဲ့ ပုံလေးတွေ video လေးတွေကိုအရင်ကအမြဲမြင်ရပေမယ့် အခုဆိုသူတို့လေးတွေရဲ့ ပုံလေးတွေကိုတောင် မမြင်ရတာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။
ဒီနေ့မှာတော့ ခေတ်နဲ့သစ်က မေမေ့ကို ဝိုင်းကူရင်း သစ်ပင်လေး တွေစိုက်ပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ချစ်သုဝေရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ ကဲ ခေတ်လေးနဲ့သစ်လေးကို လွမ်းနေတဲ့သူတွေရှိလား? Source from Chit Thu Wai Facebook
ခ်စ္သုေဝဆို တဲ့ျပည္ သူခ်စ္အဆိုေတာ္ မင္းသမီးေလးကို အားလုံးပဲ သတိရေနၾကလိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ေမျမန္မာေခတ္နဲ႔ ေမျမန္မာသစ္ဆိုတဲ့ အႁမႊာသမီးေလးႏွစ္ ေယာက္ရဲ႕ အေမျဖစ္သလို အဆိုေတာ္ႀကီး ကိုလင္းလင္းရဲ႕ ခ်စ္စရာအိ မ္သူဇနီးေလးဆိုရင္ လည္းမမွားပါဘူးေနာ္။
ျပည္သူနဲ႔ တစ္သားတ ည္းအၿမဲ႐ွိေနတဲ့ သူမတို႔မိသားစုကို ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း လြမ္းေနမွာပါေနာ္… သူမရဲ႕ သြန္သင္မႈေအာက္မွာ ႀကီးျပင္းလာတဲ့ ေခတ္ေလးနဲ႔သစ္ ေလးတို႔ကို ပရိတ္သတ္ေတြက ေမြးစကတည္းကေန အခုခ်ိန္ထိ အရမ္းကိုခ်စ္ခင္ ေနၾကတုန္းပါ…
သမီးေလးေတြက အေဖေရာ အေမေရာ နဲ႔တူၿပီး သိပ္ကို သြက္သြက္လက္လ က္နဲ႔ ခ်စ္ေမႊးပါၾကပါတယ္။ ဉာဏ္လည္းအရမ္းေကာင္းၿပီး ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ လူလည္အႁမႊာေလးေခတ္နဲ႔သစ္က ပရိတ္ေတြရင္ထဲ အၿမဲ႐ွိေနမွာပါ။
သူတို႔ေလး ေတြရဲ႕ ပုံေလးေတြ video ေလးေတြကိုအရင္ကအၿမဲျမင္ရေပမယ့္ အခုဆိုသူတို႔ေလးေတြရဲ႕ ပုံေလးေတြကိုေတာင္ မျမင္ရတာ အေတာ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။
ဒီေန႔မွာေတာ့ ေခတ္နဲ႔သစ္က ေမေမ့ကို ဝိုင္းကူရင္း သစ္ပင္ေလး ေတြစိုက္ေပးေနတဲ့ ပုံေလးေတြကို ခ်စ္သုေဝရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ကဲ ေခတ္ေလးနဲ႔သစ္ေလးကို လြမ္းေနတဲ့သူေတြ႐ွိလား? Source from Chit Thu Wai Facebook
Tags:ချစ်သုဝေ, ခေတ်နဲ့သစ်, လင်းလင်း
ရဲရဲတောက် အမေ့သမီး သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင် ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေမသိသေးတဲ့ ဘဝအကြောင်း